Waan Jeclahay Opera | Laga soo bilaabo Linux
Waan jeclahay opera
dabogal 92 | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo Linux ah oo i dili doona markaan ka hadlayo bog furahaas ama kuwaas oo isku dayi doona inay xoogaa i liqaan, waan u dulqaadan doonaa, waxba ugama dhacaan xD, laakiin ma xiri karo horjoogaha biraawsarka aniga ahaan haybaddiisa, labiskeyga Linux, iyo daaqaddeyda 7 sida nokia x6 symbian oo leh nooca mini opera.
Markaad isticmaale ka tahay kde, waxaad isku aragtaa inaad la kulantid dhibaato isku mid ah marar badan, dhammaan daalacashada oo dhammaystiran, wanaagsan oo caan ah ayaa lagu soo saaray interface aan la mahadin gtk, ma lihin wax kale oo aan taas ku bedelno, marka laga reebo in aan adeegsanno daalacashada sida rekonq, konqueror, qupzilla , taas oo in kasta oo ay leeyihiin ujeedo wanaagsan, cillad xagga maktabadda ah awgeed qwebkit, badanaa waxay ka dhacaan mar labaad shabakada iyagoo wata flash aad booqatay, wax xanaaq badan ayaa ah inaad fiidyow ka daawato YouTube-ka oo biraawsarkaaga la waayo, runtii ...
Opera, wuxuu ku guuleystey inuu la qabsado desktop kasta, nidaam kasta oo ka shaqeeya sida ugu fiican, isagoon iska tuurin midna wuxuuna ku guuleystey inuu abuuro suite aad u xiiso badan, oo leh opera mideynta, opera mail, macmiilka bitorrent, opera turbo ee xiriirka qunyar socodka ah iyo taageerada buuxda 64 jajab, matoor html5 cusub, ragnarok iyo astaamo caan ah sida imaatinka ugu dambayn ee dardargalinta qalabka buuxa iyo webgl ilaa iyo nooca opera ee xiga 12.
In kasta oo ay ku bixin karto xoogaa ili ka badan biraawsarrada kale, aniga fikradayda hoosaysa waxay mudan tahay in lagu xisaabtamo, mararka qaarkood ma ahan wax badan ilaha, laakiin sida loo isticmaalo ilaha, waxaan doorbidaa biraawsar adeegsada ilo dheeri ah laakiin waa dareeraha ah, marka loo eego midka isticmaala wax ka yar laakiin ku dhagan.
Bulshada Hispanic opera waa mid aad u firfircoon oo dirista warbixinnada cayayaanka waa mid aad u fudud, runtii runtii way ii fududahay aniga inaan soo sheego khaladka uu igu sameeyay markii aan galayay degellada internet ka oo aan kahadlayo saameynta ay leedahay 'kwin', taas oo waashay oo si dhakhso leh loo xaliyay , ama ugu yaraan waxaa loo diyaariyey my iyo.
Cillada kaliya ee jirta, in kastoo aniga aniga aysan aheyn, waa inay lahaansho leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waan jeclahay opera
Marka Opera ku khiyaameeyo, waxaad ii sheegtaa wax walba JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Waxaan rajaynayaa inayan: $, kani waa jacayl XDDDD
Fikirkaaga hoose ayaa la ixtiraamayaa, in kasta oo aan doorbido daalacashada buuxa, wanaagsan ee caanka ah ee lagu horumariyo istiraatiijiyad gtk ah oo aan la mahadin (sida waafaqsan fikirkaaga hoose).
Khatarta ah inaan faallo ka bixiyo faallooyinkaan, waxaan ku qanacsanahay mawduuc tixgelinaya awooda farsamo ee daalacashada, astaamaha, isbarbardhiga, si loo abuuro mowduucyo kaliya oo si gaar ah ugu adeegi kara dariiqa ololka.
Si aad u aqriso mowduucyada muujiya gebi ahaanba aragti iyo aragti aragti, waxaa jira bogag internet oo kale ah. (ra'yigayga hoose)
LOL !!! cidna naxariis uma lihid LOL !!!!
Waxaan jeclaanlahaa inaad wax qorto ... si aad uqaadan karto hehe.
Tani wax xiriir ah kuma laha naxariista, mowduuca noocan ah, waxaan doorbidi lahaa inaan aqriyo MetalByte, laakiin maadaama aanan jeclayn, anigu ma raadiyo mowduucyadooda oo waan ka fogaanayaa Muy Linux. Si cad oo fudud, looma diidana ciddii wax daabacda, laakiin waxay ka soo horjeedaa sida uu wax u daabaco.
Qofna kuguma qasbayo inaad aqriso qoraalladayda, markaad aragto narkayga, si fudud uma akhriyi kartid.
Way ku habboon tahay qoraaga iyo goobta inay ku dadaalaan sidii ay u ilaalin lahaayeen bulshada ku hareeraysan, akhristaha fudud waxaan raadsadaa degel aan u arko inuu ku habboon yahay dhadhankeyga, marka wax ama qof i dhibayo, si fiican ayaan u tegayaa nacnac
Marka ha walwalin, mowduuc kale kuma akhriyi doono halkan, ilaa aad adigu qoraaga tahay mooyee.
Ah kaalay, ha noqon sidaas oo kale Edward2
A dabogal 92 Weli waa inuu barto, taasi waa, inuu helo dheelitirka saxda ah ee qodobbada, qofna kuma dhalan isagoo og adiguna taas waad si fiican u taqaan.
Waxaad tahay saaxiib qaali ah goobta, in kastoo aad jeceshahay inaad taabato kubbadeena badiyaa hehe… waxaad ka mid tahay nolosha bogga, sidaa darteed therefore 😀
Ha noqon ciyaalnimo, haddii aadan jeclayn qodobbada dabogal 92 ha u aqrin iyaga saaxiib, laakiin ... miyaad joojin doontaa akhrinta inteena kale ee jecel inaan wadaagno aqoonteenna iyo waaya-aragnimadeenna adduunkan Linux-ka ah?
Dhaliisha Eduar2 Waan fahmi karaa hadaan dadaal sameeyo, in kastoo ay xoogaa caddaalad darro ku tahay qoraaga iyo goobta.
Waxaan idhi waan fahmay dhiirigalintaada maxaa yeelay waxay ka dhigaysaa isbarbardhiga xaalad (goob) halkaas oo maalinba maalinta ka dambaysa ay ka kooban tahay qodobo shaqsiyeed oo kicinaya ololka runtiina tani waxay ka dhigeysaa degel inuu hoos u dhaco; Laakiin tani macnaheedu maaha in maqaalkani khaldan yahay, degel wanaagsan ayaa awoodi kara "maqaallo ra'yi" waqti ka waqti waana gebi ahaanba caafimaad, gaar ahaan markay yihiin fikradaha dabiiciga ah ee maaha sida markay yihiin "fikradaha xiisaha leh" ee aan ka badnayn qabatooyin si ay akhristayaasha u muda.
Waxaan sidoo kale u maleynayaa inaan khaldanahay haddii aan idhaahdo tani waxay ahayd maqaal ra'yi, maaddaama laga reebo sadarka koowaad inta soo hartay ay yihiin xaqiiqooyin oo ay yihiin qodobbada wanaagsan (iyo kuwa tabanba) ee uu qoraagu ugu caddeeyay mowqifkiisa sadarka koowaad.
Hagaag, hambalyo, laakiin faalladaadu way jirtaa, fekerkayga hoose. PS: hadaad rabto isbarbar dhig, samee shay aad ufudud, fur google.com, kadib baarka cad hadii meesha aad ku aragto bar madow oo birqaya, waxaad ku qoreysaa opera vs chrome vs firefox waana intaas. Waxaan rajaynayaa in casharradan yar ee xikmadda weyn ee sayniska kombuyuutarka qarnigii XXI ay kuu adeegi doonaan mustaqbalka.
Waa inaad ka mid noqotaa boodboodayaasha Linux ee halkan u yimaada inay kaa xanaajiyaan, sax?
Waa hagaag, waad ku mahadsan tahay, jaahilnimadayda weyn ee aan garan waayey sida loo sameeyo raadinta google. Iyo waxa dhibsada, maxaa yeelay had iyo jeer way iigu yeeraan taas.
Waxaan u maleynayaa in isbarbardhigyadu ay ku dambeeyaan nacayb, natiijooyinka sida caadiga ah waa kuwo shakhsiyan ah, kuwa qora maqaallada isbarbardhigaya, OS, daalacashada ama codsi kasta waxay leeyihiin qalbigooda yar iyo dhadhankooda, sidaa darteed natiijooyinka waa in lagu qaataa badar milix ah, sida ugu fiican waa in la tijaabiyo ilaa inta laga helayo waxa ugu faa iidada badan uguna raaxada leh mid kasta.
Waxaan filayaa labadiinuba waad roon tihiin hadda, midna inuu afkiisa kala qaado iyo ka kale oo u jawaaba.
Yeynaan ka dhigin boggan MuyLinux cusub
Hees lagu dejinayo ruuxa
Waa run oo qodobka noocan ahi wuxuu abuuraa muran, laakiin waa fikirka tifaftiraha waxna kama qaban karno, kaliya waa ixtiraamnaa. Hadda, waxaan siin doonaa tayda maxaa yeelay sidoo kale waxaan xaq u leeyahay inaan soo saaro. Opera waa biraawsar aad u fiican marka laga reebo 3 shay:
- Isticmaal aad u sarreeya oo RAM ah.
- Si fiican ugama bixinayso 100% boggaga internetka.
- Waa ilo xiran.
Qofna ma qaadi karo amaahdaada. Opera waxay hormood ka dhigtay astaamo badan oo maanta aan ku arki karno inta badan bog furayaasha ugu caansan oo hadii aysan ka fiicnayn, waa si sax ah xaddidaadda ay u xiran tahay darteed. Hadda, in la dhaho waa ka sarreeyaa Firefox ama Chrome waxay ila tahay wax xad-dhaaf ah, inkasta oo aan ku celiyo, waa fikradda pandev92 waana mid ku jirta xaq kasta, laakiin waxaa la muujiyey inaysan xitaa gaarin ciribta labada la soo sheegay kor ku xusan.
Elav man, chrome-kayga wax badan buu i cunaa, in ka badan 500 megabytes haddii aan bilaabo inaan arko dhammaan hababka la xiriira biraawsarka, waxaan hubaa in haddii ay shaqeyso ay qarineyso geeddi-socodka habkaas, qof walbaa wuxuu u maleynayaa inuu isku mid yahay.
Firefox haddii aan daalacanayo wax ka badan 4 ama 5 saacadood, taas oo ah caadiyan sida caadiga ah, guud ahaan waxay ka badan tahay 10 saacadood, waxay bilaabataa inay gaabiso oo waa inaan nadiifiyaa buskudka iwm maxaa yeelay haddii kale si fiican uma rarto bogagga.
Waad ogtahay in sheyga xiran uusan i xiiseyneynin, siyaasada waxaan heystaa waxa aan ku sameeyo nolosha dhabta ah, waxaan u isticmaalaa Linux fikrad ahaan, laakiin maxaa yeelay fekerkeyga waa midka aniga aniga ii ah nidaamka ugu fiican ee lagu shaqeeyo, xitaa markay leedahay qaar yar yar ayaa fashilma.
Firefox Buuxda? xDDD
Waan kugu raacsanahay cillada kaliya ee ku jirta Opera inay tahay inay tahay softiweer lahaansho, in kasta oo aysan adiga ahayn, laakiin aniga iyo waxaan rajaynayaa inbadan oo kale, waxay ka dhigan tahay caqabad aan laga gudbi karin oo aan u tuuro shaki la’aan anigoo adeegsanaya. Sababta aasaasiga ah ee aan u adeegsado softiweerka bilaashka ah ma ahan farsamo ee waa mid siyaasadeed. Waxaan marwalba ka doorbidi doonaa biraawsar ama codsi kale oo bilaash ah mid farsamo ahaan ka sarreeya lahaanshaha.
PS: Maxay cinwaannada e-maylka ee been-abuurka ahi u ansaxayn la'yihiin soo dhejinta faallooyinka halkan?
Ka jawaab is-maamul
Waad salaaman tihiin soo dhawow 🙂
Ma aqaano haddii aad adeegsan karto cinwaanka emailka ama in kale, ma diidin ama habeynin wax ku saabsan emails ama wax la mid ah. Ii qor emaylkeyga shaqsiyeed si aad iigu soo dirto qaladkii kuu muuqday, ama wixii macluumaad kale ah ee aad muhiim u aragto (kzkggaara)[AT]myopera[POINT]com).
Salaan kadib iyo markale, kusoo dhawow goobta 😀
Dhibaatada i haysata ayaa ah in aan ogahay falsafada inbadan oo ka mid ah dadka wax dhisa ee gnome, waana mamnuucay wax kasta oo gtk ku jira kumbuyuutarkeyga, waxa ugu horeeya ee ay tahay inay sameeyaan waa inay ka walwalaan iskudhafka codsiyada miisaska kale oo aysan hor istaagin. waa wax laga xumaado in kuwa kale ay qabtaan shaqadii ay ahayd inay qabtaan.
Salaan bulshada Clabsol !!
Magacaygu waa Manuel Escudero waxaanan wax ugu qoraa Blog Systems Xenode; Waan ka xumahay galitaankeyga, laakiin waxaan doonayay inaan wax kuu sheego:
Munaasabaddan awgeed waxaan u qorayaa inaan ka codsado iskaashigaaga tartanka kirismaska
Waxaan ku sameynayaa barteyda, anigoo haysta abaalmarin GiftCode ah oo loogu talagalay Humble Indie Bundle 4 oo leh 12 Cayaar iyo codkoodaba, faahfaahinta ayaa halkan ku taal:
Waad ka qaybqaadan kartaa naftaada haddii aad rabto iyo waxa aan ku weydiin lahaa adiga
taageerada ayaa ah inay ku daabici doonaan qoraal boggooda internetka oo ay ku xusayaan tartanka, haddii ay rabaan
dhigista iskuxiraha xiriirka aan korka dhigay ama sharaxayo wax walba, sida ugu fiican
u eg. Tan waxaa weeye inay kaqeybgal badan tahay waxkuna uu aad u kaladuwan yahay 😉
Haddii aadan haysan waqti aad wax ku qorto, qayb ka mid ah iskuxiraha ayaa
warbaahinta bulshada, hadday awoodaan. Mahadsanid, waana xiriirnaa!
Linux isticmaale # 509052
Nidaamka Xenode - xenodesystems.com - «Ku Xidhnow Dunidaada»
Ku mahadnaq in maqaalkani uusan aheyn midkeyga, haddii kale waxaad horey u ogtahay halka ay aadi laheyd faalladaada
Opera uma arko inay dhameystiran tahay.
Waxyaabo badan baa ka maqan, marka lagu daro is waafajinta bogagga.
Laakiin sidaas oo ay tahay, haddii aad maamusho inaad dayactirto mid ama mid kale oo ka mid ah guuldarrooyinkeeda, waa biraawsarka ugu fiican adduunka.
Chromium iyo Opera ugu fiican bog furayaasha
Ma jiro biraawsar wax walba leh, si kastaba ha noqotee waxaa jira kuwa wax badan ka haysta kuwa kale (dabcan kordhinta ma tirsadaan) marka la eego nuyuusyadani waa in qofku si sax ah uga hadli karo daalacashada dhammaystiran ama ka yar.
Maxaan ogahay tho .kuwa isticmaalka iyo waxqabadka, aakhirka waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah ... kiiskeyga, wax badan ayey ku baaba'daa qaar badan oo ka badan RAM Chromium / Chrome / Iron ka badan Firefox ama Opera.
Kan aad ku jaha wareerineyso waxba ...
Aniga shaqsiyan majecli Opera, waligey majecleyn, waxyaabo kale maxaa yeelay sawirka bogaga wuxuu umuuqdaa mid laga argagaxo marka loo eego Firefox ama Chrome. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda Wi8ndows iyo Mac leh biraawsarkan isla markaana ha xusin in uusan u shaqeynaynin G + haddii aadan khiyaanada sameyn ……
Ma jecli Opera laakiin waan ixtiraamayaa mana ku qasbi doono isaga ama cid kasta oo isticmaasha. Si fudud u isticmaalkeeda halkaas ayaa ku filan oo waa sharci in tifaftiraha uu si wanaagsan uga hadlo haddii uu jecel yahay.
Maaddaama aanan jeclayn, waxaan akhriyay oo keliya saddexda sadar ee ugu horreeya qoraalkaaga laakiin kuuma qasbi doono xDD
Waxaan u isticmaalaa ArchLinux Acer Aspire One, Xfce iyo Opera oo ah biraawsarka ugu weyn, iyo aragtida ku wajahan Opera ee ku diidaya inay leedahay lahaansho badan oo Linuxers ah oo adeegsada Chrome waxay iila muuqataa laba wajiile.
Chromium wuxuu sheeganayaa inuu furan yahay, laakiin wuxuu si ballaaran ugu diraa Google, Chrome-na sidoo kale wuu sameeyaa, haddii ay doonayaan inay adeegsadaan biraawsar runti furan waa inay isticmaalaan SRWare Iron
Opera waxay isticmaashaa teknolojiyad furan, waxay taageertaa webm iyo webp, waxay ahayd mid kamid ah hormoodka soojeedinta HTML5 bedel u noqoshada webka furan, waxay bixisaa taageero hooyo oo Linux ah 64bits, ma abuureyso habab lagu kala saaray tab (daalacanayaal fara badan tab ayaa i xasuusinaya… Internet Explorer 6, oo leh daaqado yar).
Runtu waxay tahay in opera uu yahay biraawsarka kaliya ee i siiya degenaansho, xawaare (adoon u galin doodaha macquulka ah ee milliseconds in biraawsarka uu ka fiicnaan karo dadka kale mana ahan wax la fahmi karo bani'aadamnimo), nidaamka boostada oo dhameystiran, Akhristaha RSS, bittorrent, maareeyaha soo dejinta oo dhameystiran , wuxuu ixtiraamayaa heerarka websaydhka oo leh adadag adag (haddii G + uusan ka shaqeynin, markaa halkaas haddii ay jirto elitism ama dareen ah shabakad xiran), maareeyaha fadhiga, isku xidhka opera (iskuduwaha taleefankayga gacanta, kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka, mac iyo laptop-kayga), waxay ku shaqeysaa midnimo (kombiyuutaradeyda u weecineysa server badan), hadaan isticmaalo KDE way ku haboon tahay, hadaan isticmaalo GTK2 (Xfce) way ku haboon tahay, hadaan isticmaalo GTK3 (Gnome) iyana way ku haboon tahay Waxay ii oggolaaneysaa inaan ku dul wareego shabakadaha 3G, Edge iyo GPRS markaan haysan caymiska Wi-Fi ee ay ugu mahadcelinayaan Opera turbo (oo aan Firefox iyo chrome / ium midkoodna bixin iyo xitaa xakameynaya isticmaalka markaan haysto qorshe xog ah).
Markii Opera la dhaho waa "Haybad" daalacashada dhexdeeda, waa sababta oo ah waxay kasbatay booskaas, hal-abuurnimo iyo kama tagaysid nidaam hawlgal oo kasta, oo ma aha oo kaliya inay ku shubto biraawsarka baafiska degdegga ah iyo muuqaalada dusha sare
Soo dhaweyn Andrés:
Waxaan la wadaagayaa ra'yigaaga haddii aan isku dhigo meeshaada, laakiin maskaxda ku hay inaad soo saareyso qiimeyn ku saleysan khibradaada shaqsiyeed. Waa run in Opera ay leedahay dhammaan waxa aad sheegto, laakiin waxaad dhahdo runtiin run ma ahan: "Wuxuu ku ixtiraamayaa heerarka shabakadda qalafsanaanta xad dhaafka ah". Kaliya maahan G +, waa WordPress.com iyo boggag kale oo badan oo daalacayaasha sida Midori ay si wanaagsan ula dhaqmaan halka Opera uusan sameynin. Markanna waxaan ka hadlayaa waaya-aragnimadayda shaqsiyeed. Opera waa biraawsar aad u fiican, laakiin halkaa laga soo helayo "Boqorow" .. uma maleynayo inay sidaas tahay. Wuxuu leeyahay dagaalo badan oo uu ku dagaallamo iyo maadooyin badan oo uu ku soo jiito boqortooyadiisa.
Opea-ga wordpress wuxuu si fiican u shaqeeyaa, haddii kale ma aqaano sida aan halkaan wax ugu qorayo: P, g + waa inaad weydiisaa google wixii ay sameysay, maxaa yeelay bilo ka hor ogeysiisyada ayaa u muuqday kuwo wanaagsan.
Sidoo kale, waa inaad markasta adeegsataa nooca ugu dambeeya ee Opera ... 😉
Hagaag, adiga fiiri. Waxaa xiiso leh, midkoodna Chrome ama Opera midkoodna ma yareyn kartid sawirrada WordPress. Hada Myopera kaliya waxay sifiican ulashaqeeysaa Opera iyo Firefox .. hagaag .. waalan.
elav, waxaad dhahdaa Andrés wuxuu soosaarayaa shuruudo ku saleysan waaya aragnimada shaqsiyeed adigana waad sameyneysaa, waxaan sidoo kale soo jeedin lahaa in hadii aadan hubin waxa dhabta ah ee tan ama goobtaasi ku siineyso dhibaatooyinka Opera, ha u maleynin in waa khalad browser.
Ma aqaano haddii aadan si fiican naftaada u sharraxin, laakiin waxaad ku doodeysaa in biraawsar u hoggaansamo heerarka maxaa yeelay ma muujinayo goob si fiican u tahay waa caqli-gal, taas oo si toos ah u ansaxineysa IE kasta.
Waan ka xumahay waxaan ula jeeday «inaan ku doodo biraawsar maya waxay u hoggaansantaa heerarka maxaa yeelay si fiican uma muujiso goob, waa caqli-gal, in taariikh ahaan lagu ansixiyo wixii IE ah mid otomaatig ah u muujinaya goobaha. "
Haa, laakiin waxay leedahay iswaafajin la'aan aad u badan bogagga.
Isticmaalka ayaa ugu yar marka la barbar dhigo Dabka, chrome / ium.
Taasi haa, waa midka ugu badan ee u dhexeeya daalacayaasha.
Aqoonsiga waxaan u beddelay webkit dhib badana igama haysanin, horumariyayaashu ma tixgeliyaan magaca opera mararka qaarna waxaad heleysaa calaamadda aan is waafaqi karin, xitaa haddii aysan ahayn: /
Wadahadalada caadiga ah ee ah inay kani kafiican yahay kan kale, waxa fiican inaad isbarbar dhig dhab ah ku samayso daalacayaasha ugu isticmaalka badan xaaladaha kala duwan oo aad halkan dhigto, taasi waxay noqon laheyd mid aad u xiiso badan inkasta oo ay horeyba u jireen.
Wax kasta oo kale ayaa loo tarjumayaa dhadhanka shakhsi ahaaneed sida kala duwanaanta kala duwan ee had iyo jeer abuuraya wada hadalo isku mid ah oo aanad waligaa meelna gaadhin
Inta badan daalacashada caanka ah, ha lahaadaan ama ha lahaadeene, waxay qabteen ama qabanayaan shaqo aad u wanaagsan oo si isdaba joog ah wax u cusub.
Waxaan dhihi lahaa ku dhowaad wixii kale ee la doorto ayaa wanaagsan, iyadoo la adeegsanayo mid ama tan kale horeyba waxay ugu tarjumaysaa dhadhanka shakhsiga, baahiyaha, siyaabaha loo shaqeeyo ... Aniga shaqsiyan shaqsiyan kan ugu fiican waa firefox, laakiin waan ku celinayaa, aniga ahaan. Way ii shaqeysaa aniga aniga iyo shaqeynta uu biraawsarkani i siinayo kordhinta aan adeegsado mid kale ma bixin karo, waana sababta aan u isticmaalo firefox. Laakiin ma dhahayo way ka fiican tahay kuwa kale, laakiin waa midka sida ugu fiican u daboolaya baahidayda.
Adiga wax ku qora baloogyada waa inaad ogaataa in noocyada daabacaadda aysan waxba soo kordhinayn wax cusub ama wax aad u yar waana in la xakameeyaa marka la daabacayo weedho ay ka mid yihiin "haybaddaada" ama "kan ugu fiican", marka laga reebo tan waxaa jira waxyaabo badan oo hore waana daal inaad isku akhrido.
Waxaa ugufiican in la sameeyo dib u eegis wanaagsan oo xiisaha yeelan karta.
Kaliya Raspberry Higher Self ayaa awooda, xitaa haddii uusan halkan ka imaan
Hahaha ninkaas iska daa, waa inuu la socdaa maciisa fasaxa XD
Miyay tani u maleyneysaa inay tahay xD ..?
ama jahwareer jutsu = O
Hore ayaan ugu qoray maqaal ka badan inta aan doorbidi lahaa, laakiin waa tan ra'yigayga.
Waxaan si daacad ah ugu raacsanahay maqaalkaaga, Opera waa inuu shaki la’aan noqdaa biraawsarka ugufiican (shaqooyinka, heerarka, waxqabadka); Aad bay u adagtahay !! maya dhah "macaan" iyo diiwaanka aan runti u isticmaalo Nidaam Bilaash ah (marka laga reebo mararka qaarkood isticmaalka anshax ahaan saxda ah isku day wax: P).
Shakhsiyan, ma aaminsani (runna ma ahan) in lahaanshuhu uu yahay cillad (farsamo) taasina ay si otomaatig ah uga sii darayso (tayo ahaan) mid bilaash ah iyo dhaleecaynta la saadaalin karo ee macnahaas qaba ma samaynayso dareen badan iyo in ka badan sida caadiga ah taasi waxay badanaa ka timaaddaa dadka aan isticmaalin nidaamyada bilaashka ah, aakhirka waa dad adeegsada waxa ay adeegsanayaan sababtoo ah waxay jecel yihiin astaanta oo dabcan waxay ka helayaan laakiin kan kale inay yihiin astaan ​​kale.
Faalladaada ku saabsan isticmaalka iyo waxqabadka ma aqbali karo wax intaa ka badan, halkii ay layaab igu noqotay in fekerkani aanu caadi ahayn. Dadka caadiga ah waxay umuuqdaan kuwa aan ka warqabin in qalabka la isticmaalo iyo in si fiican loo isticmaalo. Codsi waa inuu cunaa si loo bixiyo waxqabad iyo waxqabad, haddayna sidaas sameyso, si sax ah ayey wax u cunaysaa; Dhinaca kale, haddii mid kale wax yar cuno oo gurguurto, ma fiicnaan doonto in wax ka yar la cuno, taa lidkeedna si liidata ayaa loo qaabeeyey (laga yaabee in si ula kac ah loo doonayo in la muujiyo "wax yar oo la cuno" maxaa yeelay dadka caadiga ah "iyo imtixaannada aqoonyahannada" tan u fiirso).
Intaas waa intaas, laakiin waxaad leedahay cayayaanka waa la soo sheegi karaa, halkee lagu sameeyaa?
Haa, cayayaanka halkan si fudud baa looga soo sheegi karaa: http://www.opera.com/support/bugs/
Sidoo kale waxaa jira gole af Ingiriis ah oo lagu dhaho dhibaatooyinka haysta: http://my.opera.com/community/forums/tgr.dml?id=2
Ugu dambayntiina waad ku mahadsan tahay inaadan sidoo kale iskutallaabta igu qodbin, waxaad iga dhigaysaa inaan xoogaa ka nasto, salaan!
Waan ku raacsanahay ... inuu xiran yahay, farsamo ahaan kama dhigeyso mid liita, marka lagu daro, Opera Desktop Team Blog waxaa had iyo jeer ka jira macluumaad iyo isku soo aruurinta cayayaanka si aad u firfircoon, ugu yaraan waxaan u maleynayaa in opera ay dhagayso adeegsadahooda (Waan ogahay, maxaa yeelay kooxda desktop-ka waxay had iyo jeer ka jawaabaan cilladaha iyo talo soo jeedinta aan sameeyay)
Waxaa jira alaabooyin la xiray oo farsamo ahaan ka liita, laakiin tani ma aha kiiska Opera